MUQDISHO, Soomaaliya - Fahfaahino kala duwan ayaa kasoo baxay Qarax miino oo lagu weeraray Kolanyo uu la socday Xilldhibaan ka tirsan Gollaha Sharci dejinta ee maamulka Koonfur Galbeed, sida uu xaqiijiyey qof goobjooge ahaa.
Qaraxa oo dhawaqiisa u ahaa mid culus ayaa lasoo wariyey inuu ku qabsaday Kolanyadda inta udhaxaysa degaanada Lafoole iyo Ceelasha Biyaha gaara ahaan degaanka Xaawo Cabdi ee duleedka caasimadda Soomaaliya.
Wararka ayaa intaasi ku daraya inuu jiro khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac, kaasoo soo gaarey ciidamo galbineysa Kolanyadda uwatay Xilldhibaanka ka tirsan Baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
Illo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa u sheegay warisdaha Garowe Online in Kolanyadda masuuliyiinta la socotay uu kamid yahay Taliyaha Saldhiga Degmada, inkasta oo aanan la hubin hadii uu wax ku noqdo weeraroa.
Kolanyadda weerarka la kow-saday ayaa la sheegay ka baxday Magaalo madaxda Soomaaliya ee Muqdisho, xili kusii jeedeen Afgooye, oo qiyaastii 30 KM dhanka Koonfur Galbeed uga beegan caasimadda dalka.
Ma jirto cid sheegatay masuuliyadda qaraxaan, balse, falal noocaan ah oo horey loogu khaarijiyey masuuliyiin ay kamid ahaayeen Xilldhibaano waxaa dhabarka saartay kooxda xiriirka la leh Al-Qaacidda ee Al-Shabaab.
Goobjooge ayaa sheegay qaraxa uu ahaa mid xooggan oo lala eegtay kolonyo galbinayay...
Wasiir hore oo ka hadlay Muranka Roobow iyo DF ee doorashada KG
Soomaliya 09.10.2018. 13:43